दसैँ, राजा नहुष र सत्ताको उन्माद – Sourya Online
अञ्जु कार्की २०७८ असोज २५ गते ६:४४ मा प्रकाशित
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एकपटक होइन दुई/दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए । ओलीको हकमा नहुष राजाको कहानी करिबकरिब मिलेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरै नगरौँ । उनी यसपटक प्रधानमन्त्री बनेको बढीमा १५ महिनाका लागि हो । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नै तीन महिना लाग्यो । त्यसमा पनि ३० घण्टा बित्दा नबित्दै एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
यतिबेला दसैँको रौनकले छोपेको छ । विजयादशमीमा मान्यजनले टीकाजमरा लगाइदिँदा दिइने आशीर्वादको श्लोकमा नहुष राजाको नाम आउँछ । नहुष राजाको जस्तै ऐश्वर्य प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिइन्छ । आखिर को हुन् त नहुष राजा ? भन्ने कुरा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ । सत्ता उन्मादका प्रतिकका रूपमा राजा नहुषलाई लिने गरिन्छ । सत्ताको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा देवताहरूले स्वर्गका राजा इन्द्रलाई गद्दीच्युत गरे । उनको ठाउँमा मत्र्यलोकका राजा नहुषलाई स्थापित गरियो । राजा नहुषले एकैचोटी स्वर्गलोक र मत्र्यलोकको शासन गर्ने अवसर पाए । धेरै ठूलो अवसर थियो यो । त्यसैले दसैँको टीका लगाउँदा आशीर्वाद दिँदै भनिन्छ, ‘ऐश्वर्यम् नहुषे, गतिश्च पवने ।’ अर्थात् नहुषको जस्तै ऐश्वर्य होस्, बायुको जस्तै गति होस् । तर, नहुष राजाले पनि अधिकारको चरम दुरुपयोग गरे ।
जुन राजा आउँदा पनि अधिकार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएपछि ऋषि परशुरामले गणतन्त्रको अवधारणा ल्याए । उनले हतियार उठाएर राजाहरू उन्मूलन गर्न थाले । तर, पुराणमा परशुराम ऋषिले क्षत्रीहरू उन्मूलन गरेको उल्लेख छ । क्षेत्रको अधिपति भएका नाताले राजालाई क्षत्री भनिएको हो । जातको क्षेत्री होइन । परशुराम ऋषिले अत्याचारी राजतन्त्र मासेका हुन् क्षत्री मासेका होइनन् । उनले सबै राजाहरूलाई पनि मासेनन् । श्रीराम जस्ता विवेकशील राजालाई उनले सम्मान गरेका थिए ।
सत्ता र शक्तिले मान्छेलाई विवेकशून्य बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएर नै राजनीतिशास्त्रीहरूले प्रजातन्त्रलाई सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानेका हुन् । किनकि प्रजातन्त्रमा कसैलाई स्थायी सत्ता प्राप्त हुँदैन । हरेक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्ने व्यवस्था कायम गराइदियो भने सत्तामा पुगेको नेता विवेकशून्य हुँदैन कि ? भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रको हो । तर, कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकका नेताहरूले आफ्नो सत्ता अस्थायी हो भन्ने भेउसमेत नपाएको देखिएको छ । त्यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानुपर्दैन । हाम्रै मुलुकमा यस्ता कैयौँ नजीरहरू छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एकपटक होइन दुई÷दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए । ओलीको हकमा नहुष राजाको कहानी करिबकरिब मिलेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरै नगरौँ । उनी यसपटक प्रधानमन्त्री बनेको बढीमा १५ महिनाका लागि हो । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नै तीन महिना लाग्यो । त्यसमा पनि ३० घण्टा बित्दानबित्दै एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । गैरवर्तमान संविधानको बर्खिलाप गर्दै हिन्दूबादी अभियानमा लागेका गैरसांसद गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाको जेठान हुनु र मन्त्रीपदमा नियुक्त हुनु संयोग मात्रै थिएन । पर्दा पछाडिका पाटाहरू धेरै छन् । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदा लोकतन्त्रमा ठूलो धब्वा लाग्छ भन्ने हेक्का नराख्ने नेता देउवा होइनन्, तर उनलाई सत्ताले यति पनि हेक्का राख्न नसक्ने बनाइदियो ।
यसपटक मात्रै होइन । देउवाको अघिल्लो कार्यकाल नै हेरौँ । उनको त्यो कार्यकाल बढीमा एक वर्ष भन्ने स्पष्ट नै थियो । त्यसपछि वाम गठबन्धनको बहुमत आउँछ भन्ने पनि स्पष्ट नै थियो, तर उनले आफ्नो सत्ता र शक्ति सधैँ कायमै रहन्छ भने जसरी अघि बढेको पनि देखियो । आफ्नो अनुकूल फैसला नगरेकै निहुँमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कालो इतिहास रच्न त्यो छोटो सत्ता अवधिमा पनि देउवा पछि परेनन् । ०५९ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा संसद् रहेसम्म आफ्नो पद धरापमा पर्ने ठान्दै देउवाले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभामको अर्को निर्वाचन गराएनन् । यो सबै सत्ता र शक्तिको उपज थियो ।
सत्तामा पुगेपछि विवेक शून्य हुनु नयाँ कुरा होइन । महाभारतमा यसका धेरै प्रसंगहरू उल्लेख छन् । जसमध्ये एउटा प्रसंग, ऋषि परशुरामको आश्रमका विद्यार्थीहरूमध्ये द्रोणाचार्य र पञ्चालका राजकुमार द्रुपद असाध्यै मिल्ने साथी थिए । शक्तिशाली देशका राजकुमार र गरिब ब्रह्माणपुत्रको यो मिलनले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो । विद्यामा द्रोणाचार्य धेरै मेधावी थिए । मेधावी भएकैले पञ्चाल राजकुमार द्रुपदले उनलाई साथी बनाएका थिए । करिब १२ वर्षको कठोर साधनापछि विद्या आर्जन गरी द्रुपद आफ्नो दरबार फर्के, द्रोणाचार्य कुटीमा फर्के । द्रुपदले पञ्चाल राज्यको सत्ता सम्हाले भने द्रोणाचार्यले कृपीसँग विवाह गरी गृहस्थ जीवन सुरु गरे । उनीहरूका एक पुत्र जन्मे, अश्वस्थामा ।
खान लगाउनकै धौ धौ भएकाले द्रोणाचार्यकी श्रीमती कृपीको स्तनबाट छोरा अश्वस्थामाको पेटभरिने गरी दूध आउन सकेन । छोरा लुरे र ख्याउटे बन्दै गएपछि द्रोणाचार्य र कृपीलाई ठूलो चिन्ता भयो । एक दिन कृपीले भनिन्, ‘पञ्चालका राजा द्रुपद त तपाईंका बालसखा हुन्, धेरै मिल्नुहुन्थ्यो रे ! उनी यतिबेला जेजति पनि सहयोग गर्ने अवस्थामा छन्, जानुहोस् र एउटा गाई मागेर ल्याउनोस् ।’ दुःख सहेरै बस्ने, तर माग्न नजाने द्रोणाचार्यको स्वभाव थियो, तर पुत्रको ख्याउटे अनुहार सम्झे, आफ्नी श्रीमतीको आग्रह सम्झे । उनी दु्रपद राजाको दरबारतिर लागे । दरबारको द्वारपालसँग भने, ‘तपाईंको साथी द्रोणाचार्य भेट्न आएको छ भन्ने सन्देश लगिदिनु ।’ द्वारपालले सन्देश लगे, तर राजा द्रुपदले चिनेनन् वा चिन्न चाहेनन्, अपमानपूर्वक गलहत्याएर द्रोणाचार्यलाई दरबारको द्वारबाट निकालिदिए ।
महाभारत ग्रन्थमा उल्लिखित एक प्रसंग हो यो । महाभारतका मर्मज्ञहरू भन्छन्, ‘महाभारतमा जे जे उल्लेख छ, यतिबेला पनि समाजमा हुबहु त्यही त्यही लागू छ, महाभारतमा जे उल्लेख छैन त्यो घटना समाजमा हुँदै हुँदैन ।’ औसत दिमाग भएका मान्छेहरूको हातमा जब शक्ति आउँछ, तब उनीहरू मानसम्मान, मोजमस्तीबाहेक जीवनमा आफ्नो अरू पनि जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सन्छन् । एकपटक सत्ता आर्जन भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा छाड्न चाहँदैनन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला पनि वैज्ञानिक तथा दार्शनिकहरूको दिमाग हल्लाइरहेको छ । सत्तामा पुगेपछि मान्छेले आफ्नो वास्तविक हैसियत किन बिर्सन्छ ? हिजोका सहयात्रीहरू भन्दा आफूलाई पृथक किन ठान्छ ? भन्ने विषयमा विभिन्न अनुसन्धानहरू भएको पाइन्छ । यी अनुसन्धानमध्ये बेलायतका मनोवैज्ञानिकहरूले गरेको पछिल्लो अध्ययनले केही तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार मानिसको दिमागमा मुख्य दुईवटा रसायन हुन्छन् । एउटा रसायन शक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । शक्तिसँग सम्बन्धित रसायनको गति सिधा रेखामा निरन्तर अघि बढिरहन्छ, कुनै पनि अवरोधहरू उसले सहँदैन, यस्ता अवरोधलाई पेलेरै अघि बढ्छ ।